Periscope Post နှင့် Audio သည် Dolby Atmos စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဇာတ်ရုံအရောအနှောကိုဖော်ပြခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dolby Atmos လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ Periscope Post ကို & Audio စျေးပြဇာတ်ရောသမအဆင့်
Dolby Atmos လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ Periscope Post ကို & Audio စျေးပြဇာတ်ရောသမအဆင့်
အသံ Intervisual ဒီဇိုင်းကဒီဇိုင်း, စင်မြင့်သည်လက်ရှိတွင်အသစ်တခု streaming များစီးရီးဖော်စပ်နေသည်။
ဟောလိဝုဒ်- Periscope Post ကို၎င်း၏မကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်စက်ရုံမှာ Dolby Atmos-နိုင်စွမ်းပြဇာတ်ရောနှောဇာတ်စင်၏ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးခဲ့ပါသည် ဟောလိဝုဒ်။ အဆိုပါစင်မြင့် dual-အော်ပရေတာ features လွန်စွာလိုလားသော S6 console ကိုဖော်စပ်နှင့် Atmos လွှတ်ပေးရန် streaming နဲ့ထုတ်လွှင့်ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းများအတွက်ပေါင်းဘော်ရောနှောထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စင်မြင့်ပေါ်မှာရောမွှေဖို့ပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းကဒီကဆြုံး premiere ဟုသတ်မှတ်နေတဲ့ streaming ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ Rick Ash ကိုနဲ့ Ron Eng ပြန်လည်မှတ်တမ်းတင်ရောနှောဖြစ်ကြသည်။
"ကျနော်တို့အနာဂတ်-အထောက်အထားသောရောနှောဇာတ်စင် built င့်လာမှနှစ်ပေါင်းဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်း streaming နဲ့ထုတ်လွှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသွားမှာပါ" ဟု Periscope Post ကို & Audio အထွေထွေမန်နေဂျာဘင် Benedetti ကပြောပါတယ်။ "Atmos အစာရှောင်ခြင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်စံဖြစ်လာနေသည်။ ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သည့်စံချိန်စံညွှန်းများထောက်ပံ့နေချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်အားလုံးနတ်ကတော်များအတွက် Atmos ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိသည်။ ဤအဆင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက်အဆုံးစွန်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ "
အလုပ်အမှုဆောင်အရောင်းမန်နေဂျာ Rich အဲလစ်ကထပ်ပြောသည်။ "ကျနော်မြင်ပါကယင်း၏အဖျားခတ်သောအသံများနှင့်လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့်လွထားပြီးစကားကိုနားထောငျဖို့အတွက်ယူဆောင်တော့လူတိုင်းက" စင်ပေါ်မှာရန် client ကိုတုံ့ပြန်မှု, ခြွင်းချက်ခဲ့ "။ တစ်ခုလုံးကိုအသင်းတို့သည်ကြီးစွာသောအလုပ်အကိုင်အပြုတော်မူပြီ။ "
Periscope Post ကို & အသံရဲ့အသစ်ပြဇာတ်ရောနှောဇာတ်စင်။ ဒါဝိဒ်သည် Goggin နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ။
စင်မြင့်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအသံ Intervisual ဒီဇိုင်း (Aid) မှာဝါရင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ S6 console ကိုအတူစင်မြင့် feature များ လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များ | Dante, MADI, AES နဲ့ Analog အသံအသုံးချဖို့ MTRX interfaces နှင့်အတူ Ultimate စက်။ "ဒီအခန်းကိုဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်ဘာကျော်လွန်မှတည်ဆောက် ဟောလိဝုဒ် အသိုင်းအဝိုင်းမြင့်မားဆုံးကို dub ဇာတ်စင်အတွက်မျှော်လင့် "Aid ကျောင်းအုပ်ကြီးဂျင်မ်ခြေလှမ်းကဖော်ပြသည်။ "ဒါဟာ headroom တွေအများကြီးနဲ့အလွန်တင်းကျပ်စွာသံကိုပါပဲ။ သူကတောင်အရှိဆုံးခှဲရောသမမွှေများအားဖြင့်စိန်ခေါ်ခံရမယ့်မပေးပါ။ "
ဆောက်လုပ်ရေးထက်နည်းငါးပတ်အတွင်းအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ "အသံ Intervisual ဒီဇိုင်းပန်းကန်မှအရှိန်မြှင့်," Benedetti ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တွေ့ဆုံရန်အပိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၌ထား၏။ အခန်းထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသံ။ ဒါဟာအံ့သြစရာနွေးသောအသံနှင့်အာဏာအများကြီးရတယ်ရဲ့။ "
Aid ကိုလည်းတစ်ဦး ADR ဇာတ်စင်ပြီးစီး, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အသေးစားအုပ်စုများ hosting နိုင်စွမ်းနှင့် layback / QC အခန်းထဲမှာထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး streaming များနှင့်နေအိမ်ပြဇာတ်ရုံစီမံကိန်းများအတွက်သုံးခုထပ်တိုးရောနှောအဆင့်ဆင့်အပေါ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ Ultimate | ဒီကျဆုံးခြင်းပြီးစီးဘို့စီစဉ်ထားသူတို့မှာလည်းနိုင်စွမ်း Dolby Atmos ဖြစ်နှင့် S6 consoles စနှင့် Pro Tools များ feature ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပြဇာတ်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အလုပ်အားကြီးသောဂီတအစိတ်အပိုင်းရှိပြီးဖြစ်သောအသစ် 10-ဇာတ်လမ်းတွဲစီးရီး, ရောစပ်စတင်ဖွင့်သောကာလ၌ပြီးစီးခဲ့သည်။ "ဒီပြပွဲ၏ဒိုင်းနမစ်ဂီတဘဏ်ဍာအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့တိတ်ဆိတ်အတွင်းစိတ် monologues ကနေကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြပြီးအခန်းအံ့သြလောက်အောင်ကိုကောင်းစွာကအားလုံးအတှကျဖျော်ဖြေနေပါတယ်" ဟု Ash ကို, သုံးအချိန်သူဟာ Emmy Award ဆု-ဆုရှင်ကပြောပါတယ်။ "အခန်း၏အောက်ခြေအဆုံးအလွန်တင်းကျပ်စွာနှင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ rocks! "
Ergonomics နှင့် acoustic စင်မြင့်ပြဇာတ်နှင့်အ streaming များစီမံကိန်းများအတွက်အညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, Ash ကိုထပ်ပြောသည်။ ဒါဟာအစပူးပေါင်းမြှင့်တင်ရန်ထွက်ချထားသည်။ "အခန်း၏ပြန်လည်ရောနှော consoles စနီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "Clients တွေအနေနဲ့အလွယ်တကူစကားပြောနှင့်ရောနှောနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များသည်ရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သို့ဘက်ပေါင်းစုံခံစားရကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ "
"ဒါဟာအကြီးအခန်းကိုဖွင့်," Eng သဘောတူ။ "ကျနော်တို့လေးယောက်ဖြစ်စဉ်များပြီးစီးခဲ့ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များရလဒ်နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ showrunner နှင့်သွန်းဘို့ပြန်ဖွင့်အစည်းအဝေးများကျင်းပတော့, သူတို့တကယ်ပျော်မွေ့ကြသည်။ ဒါဟာပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါပြပွဲဖွင့်ကြီးကြပ်အသံကအယ်ဒီတာ, အနုမြူအသံ၏သူဟာ Emmy Award ဆု-ဆုရှင်တွမ်က de Gorter ညီတူညီမျှသဘောကျသည်။ "ငါစင်ပေါ်မှာရောပထမဦးဆုံးပြသဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအကြီးအသံနဲ့အပြစ်ကင်းစင်စွာပြေးလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာသိသာတဲ့ကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားပါပဲ။ "
အဆိုပါပြဇာတ်ရောနှောဇာတ်စင်၏ပြီးစီးပြည့်စုံရုပ်ပုံလွှာသည်နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုအသံမှ Periscope ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် ဟောလိဝုဒ်။ "ကျနော်တို့က A-level ကိုရုပ်ရှင်ရုံဤစက်ရုံစက်ချုပ်နှင့်အရည်အသွေးတန်ဖိုးထားသော client များ streaming ပါတယ်," Benedetti ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များနှင့်ရူပါရုံကိုထောကျပံ့ချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထူးခြားသောကြောင်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ခြင်းလှပဖန်တီးမှုစကားရပ်အားပေးပါတယ်။ "
အသံ INTERVISUAL ဒီဇိုင်းအကြောင်းကို
audio Intervisual ဒီဇိုင်း (Aid) မတူနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် tools တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 200 Audio / Video နည်းပညာကိုကျော်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဒီဇိုင်း, အရောင်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသည့်စနစ်ပေါင်းစည်းမှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အထူးပြုသည်။ Aid ဂီတနဲ့ audio postproduction များအတွက်မီဒီယာဌာနများနှင့်နည်းပညာကိုအထူးပြုနှင့်အောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းစီမံကိန်းများကိုရာပေါင်းများစွာပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ဂျင်မ်ခြေလှမ်း 1984 အတွက်တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ယခုကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲ။ မူလကယင်းစံချိန်စက်ရုံစတူဒီယိုထဲကအခြေခံပြီးဦးခေါင်းရုံးသည်လက်ရှိတွင် Culver စီးတီး / LA ကတွင်တည်ရှိသည်။
လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Dolby Atmos တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-09
ယခင်: Aspen မီဒီယာ Keep-ဒါဟာ-ရိုးရှင်းသော Dante အသံ UNiKA မှစ. Presents
နောက်တစ်ခု: Rangers ကင်မရာစနစ်စေရန်အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကထပ်ပြောသည်ဟီလီယမ်နှင့် Gemini အာရုံခံ Options ကို